တာဝန်ခံမှု | FLEGT
VPA နှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှု/
VPA မှ ကောင်းမွန်သော သစ်တော်အုပ်ချုပ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း/
VPA က တာဝန်ခံမှုကို ဘယ်လိုတိုးတက်လာနိုင်စေသလဲ။
တာဝန်ခံမှုရှိရန်အစိုးရများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းသည် ၎င်းတို့ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင် ရမည်။ ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တာဝန်ယူတတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်များအတွက် တုံ့ပြန်နိုင်ရန်လည်းပြင်ဆင်ထားရမည်။ တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောသစ်တော အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည် -
၎င်းသည် သစ်တောသယံဇာတများခွဲဝေပေးခြင်းနှင့် အခွန်နှင့်အခြားဝင်ငွေများ ကောက်ခံခြင်း အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စနစ်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို အကျိုးပြုပါသည်။
၎င်းသည်နိုင်ငံအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တရားဝင်ဖြစ်မှုကို တိုးမြှင့်စေသည်
၎င်းသည် သစ်ခုတ်လုပ်ငန်းများကြောင့် ထိခိုက်ခံရသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင် များထံမှ နစ်နာကြေးရရန်တင်ပြခွင့် ရှိလာစေသည်or the authorities
၎င်းသည်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဖော်ထုတ်အပြစ်ပေးခြင်းနှင့် တရားမဝင်သစ်ခုတ်နိုင် မည့်အခွင့်အရေးများကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် တရားဝင်လုပ်ဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် သစ်တော ကဏ္ဍ တွင် ပို၍ တရားမျှတစေသည်
၎င်းသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရအာဏာအပေါ် စစ်ဆေးခြင်းများနှင့် ချိန်ညှိခြင်းများကို ချမှတ်ပေး သည်
အချက်မှာ တာဝန်ခံမှုမရှိခြင်းသည် တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းကိုရှင်သန်စေရန်ထောက်ကူပါသည်။ တာဝန်ခံမှုမရှိခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မှေးမှိန်စေပြီး အဖွဲ့အစည်းများမှ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင် သင့်သည်ကို ဆောင်ရွက်ရန်အဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် ပြည်သူများမှ ယုံကြည်မှု လျော့နည်း သွားလျှင်အစိုးရကို အားနည်းစေပါသည်။
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) သည် သစ်တောကဏ္ဍ အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များအပြင် ၎င်းတို့လိုက်နာရ မည့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို အလွယ်တကူနားလည်အောင် ရှင်းရန် နှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ VPA သည် သစ်တောများ အတွက် တာဝန်ရှိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏တရားဝင်ဖြစ်မှု ကိုတိုးမြှင့်ပေး ပါသည်။ VPA သည် အစိုးရ မဟုတ်သည့်အကျိုးဆက် စပ်ပတ်သက်သူများကိုလည်း အစိုးရမှတာဝန်များ မအောင်မြင်သည့်အခါတာဝန်ရှိသူ များကိုတာဝန်ခံစေ မည့်နည်းလမ်းများကိုပေးပါသည်။
တာဝန်ခံမှုသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု နှင့် တာဝန်ခံနိုင်စွမ်းကိုထိန်းထားနိုင်မည့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကဲ့သို့သော ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ရှုထောင့်များအပေါ်တွင် မူတည်နေ သည်။ ရှုထောင့်တစ်ခုစီသည် အခြားရှုထောင့်များကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များ သည် တာဝန်ခံမှုအား နည်းလမ်းများစွာဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ပါဝင်ခြင်း။ ပထမဦးစွာ VPA လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်သည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများ၏ ပါဝင်ခြင်းကို လိုအပ်သည်။ ပါဝင်ခြင်းသည် ပွင့်လင်းမှုပမာဏကို သေချာစေပြီး လူအများအား ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်မှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အခွင့်အရေးများကိုပေးသည်။ ပြည်သူများပါဝင်ညှိနှိုင်းတာဝန်မှု လုပ်ငန်း စဉ်သည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍ၊ အခွင့်အရေးများ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို နားလည်စေရန် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးပေးပြီး တာဝန်ခံမှုကိုတောင်း ဆိုနိုင် ရန် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ဆောက်ပေးပါသည်။ တာဝန်ခံမှုသည် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် စွမ်းဆောင် ရည် နှင့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ၏ ဆွေးနွေးပွဲများ နှင့်ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် ပါဝင် လိုသည့်စိတ်ဆန္ဒအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာ များ၏ VPA မှပါဝင်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း .နှင့် ပတ်သက်သည့်အခန်း တွင်ကြည့်ပါ။
ဥပဒေရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့် ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း။ တရားဝင်သစ်ဖြစ် ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်သည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အနေဖြင့် ကုန်သွယ်နိုင် ရန် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းကို သရုပ်ပြရန်လုပ်ဆောင်ရမည်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ စနစ်သည် တရား ဝင်ဖြစ် ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ရန် သက်သေအထောက်အထားများကို စုစည်းသည်။ ၎င်းသည် လေးစားလိုက်နာမှုကို စစ်ဆေးသူများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် လိုက်နာမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိပါက လုပ်ဆောင်ရ မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းရှင်းလင်းဖော်ပြပါသည်။ စနစ်သည် တရား ဝင်ဖြစ် ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ရန် သက်သေအထောက်အထားများကို စုစည်းသည်။ ၎င်းသည် လေးစားလိုက်နာမှုကို စစ်ဆေးသူများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် လိုက်နာမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိပါက လုပ်ဆောင်ရ မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းရှင်းလင်းဖော်ပြပါသည်။ ထို့ကြောင့် တရားဝင် သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့် စနစ်၏ ခိုင်မာမှုသည် ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးတွင် တာဝန်ခံမှုကို အားကောင်း လာစေပြီး အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် အေဂျင်စီများက ဥပဒေချိုးဖောက်သူများ အပေါ်အရေးယူမှု များချမှတ်နိုင်ရန်ထောက်ကူပါသည်။ VPA ဆိုင်ရာကိုး ကားစရာများ ၏VPA မှ ဥပဒေပြုရေး နှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုမည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်စေသနည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အခန်းတွင် ကြည့်ပါ။
နစ်နာချက်ဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ VPAs များသည် အငြင်းပွားမှုများနှင့် တိုင်ကြား မှုများကို ဖြေရှင်းပေးမည့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် VPAs များအားလုံး သည် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအတွက် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ ကော်မတီနှင့် အတူ EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံရှိ အာဏာပိုင်များထံသို့ အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များကို စာဖြင့်ရေးသား တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုတင်စီမံထားသည်။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီများသည် အစည်းအဝေး များတွင် တင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။ အချို့ VPAs များသည် ဝီစီမှုတ်သူများ (တိုင်ကြားသူများ) ကို အထူးတလည် ရည်ညွန်းပြောဆိုမှုများကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါသည်။
အခြား VPA ရလဒ်များ
VPA၏စာသားနှင့်နောက်ဆက်တွဲများသည်အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်တာဝန်ခံမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်၊ အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများအားဖြင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူအားအသိပေးရန်လိုအပ်ခြင်း ( VPA မှ ပွင့်လင်း မြင်သာ မှုကို မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်းတွင်ကြည့်ပါ)
VPA စာသားတွင် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းသဘောတူညီချက်များကိုထည့်သွင်းထားခြင်း
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကတိကဝတ်များနှင့် ရည်ရွယ်ထားသော ဥပဒေရေးရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတို့ကို အကြမ်းဖျဉ်းဖော်ပြခြင်း
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ရည်မှန်းချက်များသို့ဦးတည်သည့်တိုးတက်မှုများကို ခြေရာခံနိုင် ရန် ထောက်ကူသည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် လမ်းပြမြေပုံထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားမှုများကို ပူးတွဲအကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ သို့အသိပေးနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခြင်း
အများအားဖြင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာ သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုရန် VPAs ကိုခွင့်ပြုခြင်း
VPA ဆိုင်ရာကိုးကားစရာများ၏ လွတ်လပ်သောလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အခန်းတွင် ဆက်လက်လေ့လာပါ။
ဥပမာ။ လိုင်ဘေးရီးယန်း ဒေသေခံပြည်သူများက အစိုးရအား တာဝန်ယူစေခြင်း
၂ဝဝ၆ ခုနှစ် လိုင်ဘေးရီးယား သစ်တောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေအရ အစိုးရသည် သစ်တော ကုမ္ပဏီများမှ ပြည်သူ့မြေနေရာကို သစ်ခုတ်ရန်အတွက်ပေးသွင်းရသည့် မြေငှားခအခွန် ၏ ၃ဝ% ကို သစ်တောဒေသခံ ပြည်သူအဖွဲ့ အစည်းများသို့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သစ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီမှ ပေးချေရမည့် မြေငှားရမ်းခ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အပြင်၊ ၎င်းတို့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ခုတ်သိမ်းပိုက်သည့်သစ်များ၏ ကုဗမီတာနှင့်တွက်သည့် အခကြေးငွေကိုလည်း ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သို့ရာတွင်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တုန်းက၊ မျိုးစုံသောဖိုရာများတွင် ထုတ်ပြန်မှုများမြင့်တက်လာသော်ငြားလည်း၊ မြေငှားရမ်းခ၏ ဝေစုကို မည်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းကမျှ လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ လိုက်ဘေးရီးယားမှ VPA အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်၊ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ အသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်စားလှယ်များမှ ၎င်းတို့ရဲ့ သိလိုသည်များကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားသစ်တောအသွင်ပြောင်းဥပဒေရ၊ အစိုးရမှ အသိုင်းအဝိုင်း၏ခွဲဝေထားသည့် ရန်ပုံငွေအား အမျိုးသားအကျိုးခံစားခွင့်မျှေဝေမှု ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံသို့ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။ လိုက်ဘေးရီးယားအစိုးရမှ ယခုအချိန်အထိ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
မြေငှားရမ်းခအတွက် အခကြေးငွေအား ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံသို့ ပထမဦးဆုံးလွှဲပေးခြင်းမှာ VPA အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသောအခါ၊ ရန်ပုံငွေအသိုင်းအဝိုင်းပရောဂျက်များတွင် အသုံးပြုဖို့ရန်လိုအပ်သည့် ငွေကြေးအတွက် အသိုင်းအဝိုင်းများမှ လျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိန်းသိမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့တွင် NGO ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ သဘာပတိအဖြစ်ပါဝင်နေပြီး ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များတွင် အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပါသည်။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော ကဏ္ဍများ
VPA မှ ကောင်းမွန်သော သစ်တောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း။
စွမ်းဆောင်ရည်ကို VPA မှ မည်ကဲ့သို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်သနည်း။
VPA မှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
VPA မှ တာဝန်ခံမှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
VPA မှ ဥပဒေပြုရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
VPA မှ ပါဝင်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their Impact. FERN. 50pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide For Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. Implementing VPAs: Outlining Approaches for Civil Society's Participation in VPA-related Law Reforms. Ghana Regional Workshop: Experiences from the FLEGT/VPA process in West and Central African countries. ClientEarth. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]